Fampiharana sy lalao maimaim-poana 3 mandritra ny fotoana voafetra hanombohana ny taona | Vaovao IPhone
Fampiharana sy lalao maimaim-poana 3 mandritra ny fotoana voafetra hanombohana ny taona
Ignacio Sala | | Fampiharana iPhone, Lalao IPhone
Tsy misy tsara noho ny manomboka ny taona amin'ny fifaliana. Ary inona ny fifaliana tsara kokoa noho ny afaka manararaotra ny fihenan'ny vidin'ny lalao telo sy ny fampiharana izay nanomboka ny taona azo alaina maimaimpoana. Amin'ity indray mandeha ity dia asehonay anao ny lalao 1979 Revolution, Pocket Earth PRO Offline Maps & Tralles Guides ary eZy Watermark.
1 Tolom-piavotana 1979: Lalao Adventure an'ny Sinema
2 Pocket Earth PRO Sarintany ivelany sy fitarihan-dia
2.1 Endri-javatra an'ny Pocket Earth PRO Offline
3 eZy Watermark
Tolom-piavotana 1979: Lalao Adventure an'ny Sinema
1979 Revolution dia manana vidiny 4,99 euro mahazatra ao amin'ny App Store. Tamin'ny taona 1979 Revolisiona dia hiditra amin'ny kiraron'ilay mpanao gazety Reza isika, izay tratry ny fikomiana hanohitra ny mpanjakan'i Iran.
Tolom-piavotana 1979: Lalao Adventure an'ny Sinema€ 5,49
Pocket Earth PRO Sarintany ivelany sy fitarihan-dia
Ny Pocket Earth PRO Offline Maps dia misy vidiny mahazatra 4,99 euro. Pocket Earth Pro dia manome antsika sarintany amin'ny antsipirihany sy mpitari-dia an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fanampiana ivelan'ny Internet izay hisorohana ny saram-pandehanana sy izay miasa miaraka amin'ny GPS an'ny iPhone.
Endri-javatra an'ny Pocket Earth PRO Offline
Sarintany tsara kalitaon'ny Retina ho an'ny ampahany lehibe amin'ny habeny! Ny fampiharana sarintany haingana indrindra sy mora ampiasaina amin'ny App Store!
Sari-tany an'izao tontolo izao mifandraika sy antsipiriany! Maherin'ny 100,000 toerana maimaim-poana tanteraka!
Midira amin'ny sarintany amin'ny Internet na amin'ny fomba ivelan'ny Internet, ary tahirizo ny vidin'ny roaming!
Amboary ny sari-tany mba tsy hampiseho afa-tsy ny fampahalalana tena tadiavinao
Làlana fitsangatsanganana an-tserasera miaraka amin'ny tari-dalana. Mamorona làlana fitsangatsanganana maro ho an'ny fivezivezena ivelan'ny Internet
Fampidirana adiresy sy fifandraisana amin'ny Internet amin'ny Internet - tadiavo amin'ny sari-tany ny namanao
Voalazantsika ve fa ny zavatra rehetra dia ivelan'ny Internet? Eny, Offline, mandeha amin'ny toerana rehetra izy, tanàna, tanàna, eo afovoan'ny toerana! Aza miatrika fiampangana olona intsony, andramo izahay!
Pocket Earth PRO€ 6,99
eZy Watermark dia manana vidiny mahazatra 2,99 euro. eZy dia rindranasa mety indrindra ho an'ireo mpampiasa iOS izay te hanampy mari-drano alohan'ny fizarana haingana sy mora ny sarin'izy ireo, noho ny interface tsotra nefa mahomby
eZy Watermark Photos€ 6,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Fampiharana sy lalao maimaim-poana 3 mandritra ny fotoana voafetra hanombohana ny taona
Very ny iPhone-nao? Torolàlana hanidiana na hahitanao ny iPhone very
Veloma hihena miaraka amin'i Prometheus, Apple dia nanakana ny mety hitranga